आज विश्व मानव अधिकार दिवस । विश्व मा आधुनिकता सँगै मानवअधिकार उल्लंघन का घटनाहरु मा पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । मूख्यरुपमा, राजनितिक आस्थाका कारण ले धेरै भन्दा धेरै मानवअधिकार उल्लंघन को घटना घटिरहेको छ ।
एम्नेस्टि इन्टरनेसनल बाट: Amnesty International has called on governments to make the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rightsatime for action not just for celebration.
आउनुहोस्, हामी पनि मानवअधिकार दिवस को दिन मानवअधिकार कहिले उल्लंघन गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गरौँ । यसका लागि तपाईहरु, यो तल को मैनवत्ति बाल्न सक्नुहुन्छ । अनि यो मैन बत्तिलाई कहिले निभ्न नदिनुहोस् ।
आउनुहोस्, यो मैनबत्ति कहिले निभ्न दिने छैन भनेर प्रण गरौँ । अन्त्यमा, मानवअधिकार दिवस को उपलक्ष्यमा सबैले सुख र शान्तिपुर्वक बाँच्न सकियोस भन्ने कामना गर्दछु ।
मैनबत्ति कहिले निभ्न दिने छैन भनी प्रण गरे है मैले त .........
Yumesh Pulami December 12, 2008 at 6:52 PM
मान्छे ले मान्छे गन्न छाडेको बेला
मान्छे मान्छे भित्र हराएको बेला
..... विश्व मानव अधिकार दिवस मनाएर यहाँ का सारा मान्छेहरुको मनस्थिति सुधरिएत ! धन्य हुने थियो ।